•Sicela ukufuniswa abazali ba-Wendy Mchunu. Igama likayise uSbusiso Mchunu kanti nomama wakhe akaziwa. Ongaba nolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle u-A.S Mncube enombolweni ethi: 033 505 0083/4.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaSyamthanda Sthabiso Zuma ozalwa uBonakele Zuma ongasekho emhlabeni owayehlala kaMgwagwa. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle u-A.S Mncube enombolweni ethi: 033 505 0083/4.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaNomfundo Kalipa owayezalwa uThembekile Kalipa wase-France ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uZama Mbambo enombolweni ethi: 033 502 2188.
•Sicela ukufuniswa uDudu Khuzwayo ongumama kaSiyanda Ngubane kanti ubaba wakhe uXhegu Ngubane waseMafakitini ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle u-A.S Mncube enombolweni ethi: 033 505 0083/4.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaKwanele Gwala, Sphesihle Hlongwane noKwanele Hlongwane abazalwa uGugu Gwala. Igama likayise wabo u-Anton Hlongwane.
•Sicela ukufuniswa abazali baThandolwethu Hadebe ohlala nogogo wakhe uBhengu Mkhipheni.
•Sicela ukufuniswa abazali baSimphiwe Nzimande Ntethelelo obehlala no-anti wakhe uFikile Shelembe.
•Sicela ukufuniswa ubaba ka-Owethu Mwelase okunguBongani Madlala owagcina ukubonakala eNhlazatshe. Igama likamama uNompumelelo Mwelase. Ongaba nolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle u-T Mncwabe enombolweni ethi: 033 505 0083.
•Sicela ukufuniswa umama kaSiyethemba Majola owazalwa ngomhla ka-19 November 2013 endaweni yakaNxamalala.
Igama likamama wakhe uSphumelele Majola waseBhobhonono. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle u-T Mncwabe enombolweni ethi: 033 505 0083.
•Sicela ukufuniswa umama kaSiyabonga Mbambo igama lakhe kunguNomthandazo Matsika.
Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle u-T Mncwabe enombolweni ethi: 033 505 0083.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaNkululeko noSigcinile Zwane baseZibovini. Igama likababa wabo uMduduzi Ngcobo. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle u-T Mncwabe enombolweni ethi: 033 505 0083.
•UMnyango we-Social Development ucela ukufuniswa umama kaThamba Khuzwayo owazalwa ngomhlaka 4 January 2006. Igama likamama wakhe uZodwa Nomnganga kanti ubaba wakhe uBongani Khuzwayo.
Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle u-K. Dobson enombolweni ethi: 033 3928606.
•Sicela ukufuniswa ubaba ka-Amanda Alondwe Mbanjwa owazalwa ngomhla ka-14 November 2010. Igama likamama wakhe uSithembile Mbanjwa ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNonjabulo Mdunge enombolweni ethi: 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa abazali baSimthandile Mdlalose owazalwa ngo mhla ka-14 November 2010. Igama likamama wakhe uZandy Mdlalose kanti ubaba wakhe akaziwa. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNonjabulo Mdunge enombolweni ethi: 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaLonwabo Dlamini wazalwa ngo mhla ka-18 February 2018 ezalwa uNoluthando Lovely Dlamini ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNonjabulo Mdunge enombolweni ethi: 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaNolwazi Phungula owazalwa ngomhla ka-25 January 2017 ezalwa uThembeni Phungula ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNonjabulo Mdunge enombolweni ethi: 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa ubaba ka-Asiphe Mawande Ntaka owazalwa ngomhla ka-15 April 2008 ezalwa no-Avela Lungelo Ntaka owazalwa mhla ka-12 November 2001 ezalwa uLungile Precious Ntaka ongasekho emhlabeni.
Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNonjabulo Mdunge enombolweni ethi: 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa abazali baSithabile Nokwanda Goba owazalwa ngomhla ka-7 November 2004. Igama likamama uNozipho Mncwabe kanti ubaba uMduduzi Goba abangaziwa ukuthi balaphi.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaSilondwe Majola owazalwa mhla ka-3 March 2013 ezalwa uThabisile Rejoice Majola ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNonjabulo Mdunge enombolweni ethi: 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa ubaba ka-Aphelele Makhathini owazalwa mhlaka 20 October 2006 kanye no-Asanda Makhathini owazalwa ngomhlaka 21 November 2004 bezalwa u Sindisiwe Debbie Makhathini ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNonjabulo Mdunge enombolweni ethi: 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa ubaba ka-Amanda Shange owazalwa mhla ka-14 December 2002 ezalwa uNtombifuthi Shange ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNonjabulo Mdunge enombolweni ethi: 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaBongumusa Chule owazalwa ngomhla ka-20 February 2005 ezalwa uNomalungele Chule ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNonjabulo Mdunge enombolweni ethi: 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa abazali baLebohang Thandolwakhe Majola owazalwa mhla ka- 14 February 20014. Igama likamama wakhe u-Marcia Senamile Majola ongaziwa ukuthi ulaphi kanti ubaba yena akaziwa. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNonjabulo Mdunge enombolweni ethi: 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa ubaba ka-Amahle Ngubo ozalwe mhlaka 08/09/2004, umama wakhe waziwa ngo Nomonde Ngubo ongasekho. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNonjabulo Mdunge enombolweni ethi: 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaThandolwethu Shezi ozalwe mhlaka 07/10/2015, umama wakhe waziwa ngo Thandazile Thembeka Shezi ongasekho.Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNonjabulo Mdunge enombolweni ethi: 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaNkeletseng Lipholo ozalwe mhlaka 18/12/2002, umama wakhe waziwa ngo Mptseona Lipholo ongasekho.Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNonjabulo Mdunge enombolweni ethi: 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa umama kaNosihle Zondo ozalwe mhlaka 23/06/2009, umama wakhe waziwa ngo Nonhlanhla Zondo, ubaba wakhe ongasekho.Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNonjabulo Mdunge enombolweni ethi: 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaBongumusa Chule ozalwe mhlaka 10/02/2005, umama wakhe waziwa ngo Nomonde Nomalungelo Chule ongasekho.
•Sicela ukufuniswa abazali ba-Dintle Molakeng ozalwe mhlaka 07/09/2014, umama wakhe waziwa ngoMandisa Molakeng, ubaba wakhe waziwa ngo Sihle Hlophe.Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNonjabulo Mdunge enombolweni ethi: 033 342 8971.